Version 0.3.4 – Fixes na Nu
November 5, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Nke a na version fixes ụfọdụ chinchi, tumadi na keamighi ama NexGEN galari ahụhụ (o nwere ike ime eme n'ihi na ndị ọzọ na plugins na-eji ụdị usoro). Ụfọdụ arụmọrụ tweaks na-gụnyere, ọkachasị ndị mmadụ na-eji MSN nsụgharị (Ndi ama okụt ukpụhọde ha mụbara ọnụ ọgụgụ asụsụ, ha na-akwado?)
Ọhụrụ Mee usoro anyị deployed ke mmepe gburu-gburu n'eziokwu pụtara na ọ ga-abụ mfe hapụ na-abịa na nsụgharị, nakwa na ha ga-aka iso ke mmekọrịta ya na iyi koodu repository.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere onye anyị na-anyị ga-eme n'ọdịnihu ntụziaka, Maka si Technology n'ime blog nwere mụụrụ ihe N'ajụjụ ọnụ anyị nwere Ofer Wald. Nice mpempe na-agụ onye ọ bụla onye bụ onye nwere mmasị ma na anyị ga na-amasị na-ekele maka ya inwe ndidi na ọrụ siri ike.
Pịa ebe a iji na-agụ nke a (Bekee)
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: Bing (MSN) nsụgharị, N'ajụjụ ọnụ, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye